राजाबादीहरुको देशै ह'ल्लाउने गरि स''क्ति प्रद'र्शन ! उर्लि'यो जन'सागर,राजा ल्याएरै छोड्छौ,ओलीलाई चेता''वनी - Onlines Time
राजाबादीहरुको देशै हल्लाउने गरि स’क्ति प्रदर्शन ! उर्लि’यो जनसागर,राजा ल्याएरै छोड्छौ,ओलीलाई चेता”वनी
भिमाद नगरपालिका र शुक्लागडी नगरपालिकालाई जोड्ने गरि भागर दोभानमा मोटरेवल पुल बन्न सुरु भएको झण्डै ४ बर्ष भयो । अझै पनि पुल निर्माण पुरा हुन भने सकेको छैन । बर्षाै अघि देखि निर्माणाधिन रहेको पुल नबनेपछि नजिकै रहेको झुलुङ्गे पुलबाट नै मोटरसाइकल तार्नुुपर्ने बाध्यता सेती नदी पारिका बासिन्दाले भोग्दै आएका छन् ।नदी वारपार गर्न मानिसका लागि मात्र उपयुक्त हुने झोलुङ्गे पुलबाट मोटर साइकल तार्नेहरुले नजिकै रहेको पक्की पुलबाट ओहोरदोहोर गर्ने सपना देखेका छन् ।
छिट्टै पक्की पुलबाट सवारी सहित वारपार गर्ने सपना देखेकाहरुको दैनिकी भने निर्माणधिन पक्की पुल हेर्दै झोलुङ्गे पुल तरेरनै वित्ने गरेको छ ।त्यसो त यो पुलबाट मोटरसाइलक तार्नको लागि जो कोहीले हिम्मत नै राख्दैन् । मोटर साइकल कुदाउँदा हल्लने पुल, तल देखिने नदीको रह र पारि भित्ताको अफ्ट्यारो घुम्ती यहाँ दैनिक हुने दु’र्घटनाको कारण हो । पुल नजिकै घर भएका दिपक आले पुलको यात्रा गर्ने सवारी धनिको उद्दारमा सयौँ पटक ख’टिनुभएको छ । “रातको बेलामा एक्लै हुन्छन्, सहयोगका लागि आउने कोही नभएपछि बोलाछन् जादै प¥यो”आलेले भन्नुभयो “अर्काे पुलि बने त आनन्दै हुन्थ्यो ।”
भिमाद नगरपालिका ८ भागरका लोकबहादुर रानाले यही पुलबाट मोटर साइकल चढेर वारपार गरेको बर्षाै भयो । उहाँपनि उहि पक्कि पुल कहिले बन्छ होला भन्दै र त्यही झोलुङ्गे पुल तर्ने मध्येका एक हुनुहुन्छ । “अरु बेला त ठिकै हो पुलमा मानिसको ओहोर दोहोर र सिमसिमे पानी आएको बेला साह्रै गाह्रो हुन्छ, रुवाउनु रुवाउछ चिप्लो भएर ।”उहाँले भन्नुभयो । “पुल कहिले बन्छ भनेर अस्ति सोध्न पनि गएँ, एक—दुई जनाले मात्र अलि अलि काम गरेको छ, यस्तो पाराले कहाँ पुल बन्छ ?, हामी जनताको आँखामा धुलो हालिराको छ काम गरेको छ है भन्ने त भाको छ ।”
पटक पटक झोलुङ्गे पुलमा मोटर साइकल पल्टने समस्याको साँच्ची हुनुहुन्छ, भागरकै स्थानीय बृद्ध विष्णुबहादुर आले(काइला बाजे) । दिनभर पुलमा नजिकै हुने बृद्धहरुको भेलाले दैनिकजस्तो दु’र्घटनाको दृश्य देख्नु सामान्य भईसकेको छ । “हिजो पनि एक जना ल’ड्यो, यहाँका दिनदिन ल’ड्छन् ।” आलेले भन्नुभयो ।यता सडक डिभिजन कार्यालय दमौलीका सुचना अधिकारी ईन्जिनियर सचिन श्रेष्ठले पुलको काममा निर्माण कार्य ढिलाई भएको बताउनुभयो । “हामीले पटक पटक भनेका छौँ, तर पनि कामको गति भने सुस्त भएकै हो ।” श्रेष्ठले भन्नुभयो । उहाँले पुलको लागि आवश्यक पर्ने ४ फाउण्डेशन मध्ये तीन वटा फाउण्डेशन निर्माण भएको र अव एउटा फाउण्डेशन निर्माणका लागि काम अघि बढेको जनाउनुभयो ।
आगामी बर्षको चैत १५ गतेसम्म निर्माण सम्झौता गर्ने सहमति भएता पनि एक आर्थिक बर्ष समय थप गर्ने पाउने प्रावधानका कारण २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा पुल निर्माण हुने इन्जिनियर श्रेष्ठले जनाउनुभयो । उनले भिमाद र शुक्लागण्डकी जो’ड्ने दोभानको पुल सहित जिल्लामा ९ वटा पुल निर्माणाधिन रहेको समेत जानकारी दिनुभएको छ ।ए’डभेन्चर कन्ट्रक्सनलाई ८ करोड ८० लाख ५० हजार ८ सय ८३ रुपैयामा निर्माण गर्ने सम्झौता भएता पनि पछि लागत संशोधन गरि पुल निर्माणका लागि १० करोड १ लाख ५० हजार ५ सय ९३ रुपैयाँ पुगेको छ । पुल १ सय ५ मिटर लामो रहेको छ ।
Prevअर्घाखाँचीमा यो के भयो,घरमा पुग्दा आमाको रुवा”बासी जन्मियो यस्तो छोरि help video (सहयोगकाे लागि सेयर गराै)
Nextमल्लिकालाई जाग्यो पलसँग रोमान्स गर्ने रहर । पल भए मख्खै paul shah and malika mahat new interview